Green Way - သင်၏နို့စားနွားကို နို့ထွက်ကောင်းအောင် အစာစိမ်းဘယ်လိုကျွေးမလဲ
သင်၏နို့စားနွားကို နို့ထွက်ကောင်းအောင် အစာစိမ်းဘယ်လိုကျွေးမလဲ
MDEP 16/03/2019 09:39 AM Content Provider - MDEP
Photo - မွန်ဘားစားမြက်စိုက်ခင်း
သင်၏ နို့စားနွားတွေကို အစာစိမ်းကျွေးခြင်းသည် နို့ထွက်နှုန်း၊ ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အကျိုးအမြတ်များ တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးသော အထောက်အပံ့တခုဖြစ်သည်။ မိုးရာသီရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ သင်၏နွား များကို အစာစိမ်းကျွေးဖို့ မြက်ပင်စိုက်ရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ သင်၏နွား အစာစိမ်း လုံလောက်စွာ စားသုံးနိုင်ရန် ဧကဘယ်လောက် စိုက်ပျိုးကြမလဲ? ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေတဲ့ အစာကျွေးနည်းများကို အောက်တွင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် -
နို့ထွက်နှုန်းတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက် နို့ညှစ်နွားမဟာ အစာအာဟာရ ပြည့်ဝရန် လိုအပ်ပါတယ်။ နို့ညှစ်နွားမတစ်ကောင်ဟာ အစာစိမ်းတစ်နေ့လျှင် ၅၅ပိဿာကျွေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ (တောင်းဖြင့်ကျွေးလျှင် တစ်နေ့လျှင် ၅တောင်း ၆တောင်းခန့်) တစ်လအတွက်ဆိုလျှင် ၁၆၅၀ ပိသာ။
Mombasa တစ်ဧကမှ မိုးရာသီတွင် တစ်လလျှင် ၃၈၆၀ ပိဿာထွက်ရှိနိုင်ပါသည်။ Mombasa တစ်ဧကထွက်နှုန်းသည် မိုးရာသီတွင် နို့ညှစ်နွားမ ၂ - ၃ ကောင် ကျွေးနိုင်ပါသည်။
မိုးရာသီတွင် Mombasa နှစ်ဧကစိုက်ပျိုးလျှင် နို့ညှစ်နွားမ ၅ကောင်ထိကျွေးနိုင်ပါသည်။ မြက်စိုက်လျှင် ရာသီတုနှင့် မြေဆီလွှာပေါ်မူတည်ပီး ထွက်နှုန်းအနည်အများကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒေသအလိုက်ထွက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပီး ဧက ဘယ်လောက်စိုက်ပျိုးရမယ်ဆိုတာ ဆုံဖြတ်သင့်ပါတယ်။ ခြံမှာရှိတဲ့ နို့နားနွားမ၊ နွားမတန်း၊ နွားကလေးများအတွက်လည်း အစာစိမ်းလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ထည့်တွက်ပီးစိုက်ပျိုးသင့်ပါတယ်။
သင်ရဲ့ နွားတွေအတွက် မိုးရာသီမှာ ဧကဘယ်လောက်လောက် စိုက်ပျိုးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပီးပီလား?
Source - MDEP
မွန်ဘားဆားမြက် ( Panicum maximumcvMombaca ) “Mombaca guinea”
ရိုးရာဓလေ့မှ ခွဲထွက်လာသူ နို့စားနွားခြံပိုင်ရှင် ဦးကျော်မိုး
နို့ထွက်နွားမနှင့် နို့ခမ်းနွားမ တို့အတွက် အခြေခံ အာဟာရဗေဒ
စားကျက်ပင်အတွက် Arachis Pantoi (ပဲပန်းပင်) စိုက်ပျိုးခြင်း
နွားမွေးမြူရေးအတွက် ဒစ်မန်းသပ်စ် (Desmanthus) စားကျက်ပင်
နို့စားနွားများအတွက် မြက်မျိုးနွယ်ဝင် စားကျက်ပင် (၁)
နို့စားနွားမွေးမြူသူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အဓိက အချက်များ
နို့စားနွားများအတွက် မြက်မျိုးနွယ်ဝင် စားကျက်ပင် (၂)
ရိုးရာဓလေ့မှ ခွဲထွက်လာသူ နို့စားနွားမွေးမြူရေးခြံပိုင်ရှင် ဦးအောင်မြင့်
နို့ညှစ်ပုံးနှင့်နို့ညှစ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများကို ဆေးကြောခြင်း
ရိုးရာဓလေ့မှ ခွဲထွက်လာသူ နို့စားနွားခြံပိုင်ရှင် ဦးခင်မောင်ဝင်း